Ultrasonic Mini Humidifier Air diffuser ho an'ny menaka manan-danja China Manufacturer
Description:Mini Air diffuser ho an'ny menaka manan-danja,Menaka esensialin'ny menaka Mini,Mini diffuser Humidifier
Home > Products > Mini diffuser > Ultrasonic Mini Humidifier Air diffuser ho an&#39;ny menaka manan-danja
Ny Operus aromaterapy tsotra amin'ny fanamafisana: mifehy ny zavona sy ny hazavana miovaova loko amin'ny bokotra tsotra.
2-in-1 Humidification sy Aromatherapy: Manatsara ny rivotra ambinao amin'ny fanamandoana sy hanamboarana azy, esory ny fofona ratsy ary mamorona rivo-javatra izay hanampy anao matory miaraka amin'ity diffuser ultrasonic ity.
Fampiasa saro-bidy mahery vaika azo antoka: Ny plastika PP dia maimaimpoana amin'ny alalàn'ny BPA tsy manam-pofonaina fotsiny ary amin'ny fijanonan'ny fiara mikatona, dia afaka mahazo fiadanan-tsaina ianao amin'ny alàlan'ny fiarovana fanampiny.
Humidifier Ultracom malàfotra: Ny fika mandaitra mahomby dia manondraka fofom-borona mandritra ny 7 ora izay mandeha miaraka amin'ny ora fiasanao amin'ny alina.
Manonofy marevaka: aelin'ny fofona manitra ny nofinofinao miaraka amin'ny famindra miadana sy mampitony eo anelanelan'ireo alokaloka mahafinaritra 7 amin'ny avana.
Mini Air diffuser ho an'ny menaka manan-danja Menaka esensialin'ny menaka Mini Mini diffuser Humidifier Mini diffuser ho an'ny menaka manan-danja Air diffuser ho an'ny menaka manan-danja Car diffuser ho an'ny menaka manan-danja Marbra diffuser ho an'ny menaka manan-danja Scent diffuser ho an'ny menaka manan-danja